China Slitting And Rewinding Equipment, Jumbo Roll Paper Slitting Machine, Slitting Machine Supplier
ဖေါ်ပြချက်:ဖြတ်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ပစ္စည်း, Jumbo Roll စက္ကူဖြတ်စက်, ဖြတ်စက်, အလိုအလျောက်လေ Reeler, ပြန်လာပြီ, ပြက္ခဒိန်စက်
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက္ကူစက်ပြီးပြီ
စက္ကူစက်ပြီးပြီ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဖြတ်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ပစ္စည်း, Jumbo Roll စက္ကူဖြတ်စက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဖြတ်စက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
3900 အမျိုးအစားတစ်ရှူးစက္ကူစက်အသစ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်စက်အလိုအလျှောက်စက္ကူ Reeler  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Reeler စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kraft စက္ကူစက်ရုံအလျားလိုက် pneumatical reeler  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kraft စက္ကူစက် Calender စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
duplex ဘုတ်အဖွဲ့ပြုလုပ်ခြင်းသည် Calendering စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်သုံး Rolls Calender စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းအတွက်ပြက္ခဒိန်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HUATAO ကုမ္ပဏီမှအလိုအလျောက်လေလှည့်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူကျဉ်းမြောင်းသောအစင်းဖြတ်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိုလှိမ့်နေသည့် Kraft Paper Rolls  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပစ္စည်းများကိုဖြတ်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်မြန်နှုန်းမြင့်စက္ကူဖြတ်တောက်ခြင်းကိုလှိမ့်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖြတ်ခြင်းနှင့်လှိမ့်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်စက္ကူဖြတ်တောက် Rewinder စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Rewinding စက်လျှောစက္ကူပစ္စည်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်စက္ကူဖြတ်တောက် Rewinding စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
3900 အမျိုးအစားတစ်ရှူးစက္ကူစက်အသစ်စက် လျှောက်လွှာ ၎င်းကို 18-30 g / g ပျော့ဖတ်ဖြင့်အိမ်သာစက္ကူနှင့်အိမ်သာသုံးစက္ကူထုတ်လုပ်ရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။ လက်သုတ်ပဝါအခြေခံစက္ကူ Process parameters တွေကို: ၁။ ပျော့ဖတ်: ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သစ်သားပျော့ဖတ်ဘုတ်၊...
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - စက္ကူစက်စက်အလိုအလျှောက်စက္ကူ Reeler HUATAO သည်စက္ကူစက်အမျိုးမျိုးအတွက်အလိုအလျောက်လေ ၀ င်လေထွက်လှည့်ဖြည့်ခြင်း၊ Automatic Wind Reeler နှင့် Slitting Machine သို့မဟုတ် Rewinder သို့မဟုတ် Calender Machine...
စက္ကူထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Reeler စက်
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - စက္ကူထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Reeler စက် Rewinder, Slitting Machine (သို့) Camender Machine (သို့) Automatic Wind Reeler အပါအ ၀ င်ပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ Automatic Wind Reeler...
Kraft စက္ကူစက်ရုံအလျားလိုက် pneumatical reeler
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - Kraft စက္ကူစက်ရုံအလျားလိုက် pneumatical reeler Automatic Wind Reeler ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ၁။ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း ၂ 3. ထိပ်တန်းအရည်အသွေး HUATAO မှ အလျားလိုက် pneumatical Automatic Wind Reeler Automatic Wind Reeler...
Kraft စက္ကူစက် Calender စက်
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - Duplex ဘုတ်အဖွဲ့ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်ပြက္ခဒိန်စက် Calender Machine တွင်အဓိကအားဖြင့် roller, rack, backplane, adjustment device, transmission system, roller temperature control device, security device, lubricating device...
duplex ဘုတ်အဖွဲ့ပြုလုပ်ခြင်းသည် Calendering စက်
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - duplex ဘုတ်အဖွဲ့ပြုလုပ်ခြင်းသည် Calendering စက် Calender စက်သည်စက္ကူစက်နှင့်အသားတင်စက္ကူအကျယ်တူသည် စက္ကူအထူကိုညီညွတ်စေရန်နှင့်စက္ကူ၏အသွင်အပြင်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်၎င်းကိုသတင်းစာ၊ halftone...
အရည်အသွေးမြင့်သုံး Rolls Calender စက်
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - အရည်အသွေးမြင့်သုံး Rolls Calender စက် Calender စက်၏ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: 1. စာရွက်မျက်နှာပြင်၏တင်းကျပ်စွာချောမွေ့ခြင်းနှင့်အပြီးသတ်တိုးတက်စေရန် 2. စာရွက်၏အထူကိုထိန်းချုပ်ပါ ၃။ အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်သို့မ ၀...
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းအတွက်ပြက္ခဒိန်စက် ပြက္ခဒိန်စက်လျှောက်လွှာ: ၀ က်ဘ်သည်ခြောက်သွေ့သောနေရာမှထွက်သွားပြီးနောက် Calender စက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်နှင့်ကြမ်းတမ်းသောဝဘ်မျက်နှာပြင်အကြားထပ်မံလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်စဉ်၊...
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - HUATAO ကုမ္ပဏီမှ အလိုအလျောက်လေလှည့်စက် အလိုအလျောက်လေ Reeler စက္ကူစက်ပြီးနောက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပထမ ဦး ဆုံးပြီးပြည့်စုံသောအစု။...
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - စက္ကူကျဉ်းမြောင်းသောအစင်းဖြတ်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း ဂျမ်ဘိုလိပ်စက္ကူအလျားလိုက်အပေါက်စက်၏လျှောက်လွှာ: စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများအနေဖြင့် Rewinder သည် PET, BOPP, CPP, PE, PVC, ကော်စတစ်ကာများ၊...
ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိုလှိမ့်နေသည့် Kraft Paper Rolls
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - Kraft Paper Rolls ဖြတ်တောက်သောစက်ကိုလှိမ့် ဤသည်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုမြင့်မားသော sensitivity ကို Slitting နှင့် Rewinding ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လေမှုတ်များကို unwind နှင့် rewind material အတွက်အသုံးပြုသည်။...
စက္ကူစက်ပြီးပြီပစ္စည်း - စက္ကူဖြတ်တောက် Rewinder စက် Slitting and Rewinding Equipment ၏ ဖော်ပြချက်နှင့် လက္ခဏာများ
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ကိရိယာ - အလိုအလျောက်မြန်နှုန်းမြင့်စက္ကူဖြတ်တောက်သည့်စက် Slitting and Rewinding Equipment ၏ ဖော်ပြချက်နှင့် လက္ခဏာများ...
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - စက္ကူ Rewinder ဖြတ်စက် အနည်းဆုံးအော်ပရေတာထည့်သွင်းမှုနှင့်အတူ stretch film ထုတ်ကုန်များလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် အလိုအလျောက်လေ Reeler...
အလိုအလျောက်စက္ကူဖြတ်တောက် Rewinder စက်
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - အလိုအလျောက်စက္ကူဖြတ်တောက် Rewinder စက် အနည်းဆုံးအော်ပရေတာထည့်သွင်းမှုနှင့်အတူ stretch film ထုတ်ကုန်များလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် အလိုအလျောက်လေ Reeler...
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ပစ္စည်း - Rewinding စက်လျှောစက္ကူပစ္စည်း Slitting and Rewinding Equipment သည်အဓိကအားဖြင့်စတစ်ကာများ၊ စာရွက်စာရွက်များနှင့်အခြားစက္ကူအမျိုးအစားများကိုစက္ကူဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ Slitting နှင့် Rewinding ပစ္စည်း ၏အင်္ဂါရပ်များ : 1....
အလိုအလျောက်စက္ကူဖြတ်တောက် Rewinding စက်
စက္ကူစက်အပြီးသတ်ကိရိယာ - အလိုအလျောက်စက္ကူဖြတ်စက်ပြန်လှည့်စက် စက္ကူစက်ပြီးဆုံးသည့်ပစ္စည်း၏လျှောက်လွှာ, ၁။ ဖြတ်စက် ကိုစက်မှုကော်ကပ်တိပ်၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်၊ ကြေးနီသတ္တုပါး၊ အလူမီနီယံသတ္တုပြား၊ OPP, PE, PVC၊ စာရွက်၊ ၂။...
တရုတ်နိုင်ငံ စက္ကူစက်ပြီးပြီ ပေးသွင်း
HUATAO GROUP သည်စက္ကူစက်အမျိုးမျိုးပြီးသောစက်ကိရိယာများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်လှိမ့်လှန်ခြင်း၊ Jumbo roll စက္ကူဖြတ်စက်၊ ဖြတ်စက်၊ အလိုအလျောက်လေတိုက်စက်၊
ဖြတ်ခြင်းနှင့်လှိမ့်ပစ္စည်း Jumbo Roll စက္ကူဖြတ်စက် ဖြတ်စက် အလိုအလျောက်လေ Reeler ပြန်လာပြီ ပြက္ခဒိန်စက် Kraft စက္ကူဖြတ်ခြင်းနှင့်လှိမ့်စက် စက်မှုခံစားခွင့်ကုန်ပစ္စည်း